0 Thursday December 03, 2020 - 18:41:15
Dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in ay qaadayso wajigii labaad olole ballaaran oo au ku beegsanayso dadka muslimiinta ah iyo goobaha cibaadaha ee kuyaal gudaha wadankaasi.
0 Thursday December 03, 2020 - 11:25:00
Markale cudurka Carona Virus ayaa halaag daran ka geystay wadanka Mareykanka ee dhaca qaaradda Ameerikada waqooyi.
0 Wednesday December 02, 2020 - 09:58:49
0 Tuesday December 01, 2020 - 11:17:53
Wararka ka imaanaya wadanka Suuriya ayaa sheegaya in duqeymo hor leh lagu beegsaday sarkaal katirsanaa dowladda Shiicada Iiraan ee qeybta ka ah duullaanka lagu qaaday muslimiinta sunniga ah.
0 Saturday November 28, 2020 - 08:14:26
Maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega ayaa markale weeraro sawaariikh ah ku qaaday dhowr magaalo oo katirsan wadanka Ereteriya ee dhaca bariga qaaradda Afrika.
0 Saturday November 28, 2020 - 06:55:17
Mas'uuliyiinta ugu sarraysa dowladda Shiicada Iiraan ayaa ku hanjabay in ay si adag uga jawaabi doonaan falkii lagu dilay khabiirkii hubka Niyugleerka oo shalay wadankaas lagu dilay.
0 Monday November 23, 2020 - 12:07:11
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay weerar hubaysan oo ka dhacay mid kamida magaalooyinka wadanka Mareykanka.
0 Wednesday November 11, 2020 - 16:37:48
Wadanka Mareykanka waxaa ku geeriyooday mid kamida mas'uuliyiintii ugu cimriga dheeraa dowladaha dawaaqiidda khaliijka islamarkaana aan waligiis ka dagin xilkii uu hayay.
0 Tuesday November 10, 2020 - 09:35:35
Ilhaam Calyeef oo ah madaxweynaha dowladda Azarbijaan ayaa ku dhawaaqay in uu soo idaalay dagaalkii ay ciidamadiisu uga jireen gobolka Naagoorni Karnabaakh ayna guushu iyaga raacday.
0 Tuesday November 10, 2020 - 09:23:24
Madaxweynaha waqtigiisu sii idlaanayo ee dalka Mareykanka ayaa shaqada ka eryay wasiirkiisi difaaca oo ahaa siyaasi ay si aad ah isugu dhowyihiin wuxuuna diiday Trump in uu aqbalo guuldarrada kasoo gaartay doorashooyinkii dhowaan dhacay.
Melleteriga Azarbijaan oo Armeeniya ka qabsaday magaalo Istiraatiiji ah.
0 Monday November 09, 2020 - 08:57:45
Melleteriga dowladda Azarbijaan ayaa soo hooyay guul weyn oo dhanka dagaalka ah kadib markii uu lawareegay magaalo muhiim ah oo katirsan gobolka Naagorni Karnabaakh.
0 Sunday November 08, 2020 - 10:00:32
Weerar lagu dhaawacay Nin Baadari ah oo ka dhacay dalka Faransiiska.
0 Sunday November 01, 2020 - 05:10:20
Wararka ka imaanaya wadanka Faransiiska ayaa sheegaya in weerar hubaysan lagu qaaday nin baadari ah xilli uu ku sugnaa magaalada Liyoon ee dhacda bartamaha wadankaasi.
Dhulgariir 25 qof ay ku dhinteen oo ka dhacay Turkiga.
0 Saturday October 31, 2020 - 10:17:49
Tobanaan qof ayaa ku dhintay dhulgariir aad u xooggan oo ku dhuftay wadanka Turkiga.
0 Wednesday October 28, 2020 - 20:08:41
Caabuqa Covid19 ayaa wali gummaad iyo silic ka geysanaya wadamo badan oo katirsan caalamka waxaana wali aan lahelin daawo talaal ah oo waxkatari kartan cudurkaan halista ah.
0 Wednesday October 28, 2020 - 20:01:48
Kadib caddeymihii Turump ee ahaa in masar ay qarax ku burburin doonto biya xireenka Alnahda ee dalka Itoobiya ayay kulan heerkiisu sarreeyo yeesheen madax ka socotay laba dowladood oo lafdhabar u ah khilaafka ka taagan biya xireenka laga dhisayo wabiga Niil.
0 Wednesday October 28, 2020 - 09:48:03
Bililiqo iyo boob aan caadi aheyn ayaa lagasoo sheegayaa mid kamida gobollada ugu waaweyn dalka Mareykanka, wararka imaanaya Mareykanka ayaa sheegaya in kumanaan ruux ay falal boob ah ugeysteen goobo ganacsi.
0 Monday October 26, 2020 - 09:04:09
Hoggaamiyaha dowladda Faransiiska ayaa markale ku celiyay in uusan ka hakan doonin aflagaadaynta Nabiga Maqaamka sare leh ee Muxamed SCW isagoo umuuqday in uu kicinayo mashaacirta muslimiinta uuna oranaya " waa ikan ee yaa madaxa iqaadi kara".
0 Sunday October 25, 2020 - 09:49:34
0 Saturday October 24, 2020 - 10:54:00
Dowladda dabadhilifka Suudaan ayaa ku dhawaaqday in xiriir rasmi ah ay layeelatay maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda ee xoogga ku haysta dhulalka muslimiinta Falasdiin.
0 Thursday October 22, 2020 - 12:31:20
Xamaasadda doorashooyinka madaxtinimada dalka Mareykanka ayaa meel sare gaartay, Xisbiyada Dimuquraadiga iyo Jahuuriga ayaa wada ololahoodi ugu dambeeyay ee doorashada.
0 Thursday October 22, 2020 - 09:36:02
Dowladda dabadhilifka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay khashiftay unug jawaasiis caalami ah kaasi oo basaasayay xarumaha waaweyn ee tamarta dowladda Turkiga.
0 Tuesday October 20, 2020 - 09:12:16
Dowladda Faransiiska ayaa bilaawday olole ballaaran oo ay ku beegsanayso goobaha cibaadada muslimiinta waxayna isku diyaarinaysaa in ay dalkeeda ka Erido boqolaal qof muslimiin ah.
0 Tuesday October 20, 2020 - 08:41:38
Xukuumadda dabadhilifka Suudaan ayaa ogolaatay in ay lacago boqolaal Malyan oo dollar ah siiso Mareykanka si looga qaado xayiraadaha dhanka dhaqaalaha ah ee lagusoo rogay.
0 Monday October 19, 2020 - 12:09:36
iyadoo qeyb ka ah caadiyaynta cilaaqaadka Yahuudda sahyuuniyadda ayay xukuumadda dabadhilifka baxreyn waxay wadankeeda ku martiqaadday wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socday waxa loogu yeero Israa'iil.
0 Monday October 19, 2020 - 11:41:31
Fadeexad hor leh ayaa ku habsatay mid kamida wasiirrada ugu awoodda badan xukuumadda imaaraatka carabta ee ka jirta dhulka Jaziiradda Carabta.
0 Sunday October 18, 2020 - 20:18:39
Wadanka Liibiya ayaa markale laga helay Xabaad wadareedyo ay ku aasanyihiin boqolaal qof shacab ah oo ay xasuuq ugeysteen maleeshiyaadka dagaal ooge Khaliifa Xaftar.
0 Thursday October 15, 2020 - 08:56:15
Khasaare lixaad leh ayaa markale ciidamada xukuumadda dabadhilifka Afghanistan kasoo gaaray dagaallada ka holcaya Koonfurta wadankaasi.
0 Tuesday October 13, 2020 - 06:42:10
Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in maraakiib dheeraad ah ay udirtay bariga badda meditareeniyeenka ee lagu murunsanyahay si ay halkaas uga fuliyaan howlgallo shidaal baaris ah arrinkaas oo kasii caraysiin kara dowladda saliibiyadda Gariigga oo khilaaf ba'an uu kala dhaxeeyo.
0 Tuesday October 13, 2020 - 06:31:14
Wararka ka imaanaya dhulalka Falasdiin ee ku jira gummeysiga Yahuudda ayaa sheegaya in markabkii ugu horreeyay ee ay leedahay dowladda imaaraatka carabta uu badeeco ugeeyay yahuudda.
0 Monday October 12, 2020 - 14:36:06
Caabuqa halista ah ee Covid19 ayaa wali halaag daran ka wada wadanka hindiya ee dhaca qaaradda asiya waxaana la saadaalinayaa in wadankan uu marti geliyo dhimashada ugu badan caalamka ee sanadkaan.
Azarbijaan oo Armeeniya ku eedaysay in ay jabisay Heshiiskii Xabad joojinta ahaa.
0 Monday October 12, 2020 - 08:25:27
Dagaallo goos goos ah ayaa markale dib uga bilaawday inta badan aagaga laysku horfadhiyo ee dalka Azarbijaan.